Cape Verde Airlines: Res maliteghachi ọrụ nkịtị n'oge na-adịghị anya
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Cape Verde Airlines: Res maliteghachi ọrụ nkịtị n'oge na-adịghị anya
Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Cabo Verde na -agbasa • News • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Vergbọ elu Cape Verde, ụgbọ elu Capeverdian, na-akọ na ọ rutere n'abalị ụnyaahụ n'ọdụ ụgbọ elu Amilcar Cabral na Sal Island. Thegbọ elu ahụ rụrụ ụgbọelu ọzọ.
Gbọ elu ahụ rutere n'ụbọchị Mọnde a na Sal n'ihe dị ka elekere 10 nke abalị. B767-200 si na Jordan Aviation, nke ga-arụ ọrụ maka Cape Verde Airlines na mgbazinye ego mmiri. Ọ ga - ewusi ụgbọ mmiri ndị ụgbọ mmiri Cape Verde ụgbọ elu wee weta ike karịrị oge ọkọchị.
Site n'ụgbọ elu abụọ rutere nso nso a, ụlọ ọrụ ahụ na-atụ anya ịmaliteghachi ọrụ ya na ụbọchị ole na ole sochirinụ.
Nchedo maka ndị njem mebiri site na ịkagbu ga-aga n'ihu ruo mgbe ị na-achịkwa ụgbọ elu. Cape Verde ụgbọ elu na-akwa ụta maka nsogbu niile kpatara ma na-atụ anya ịmaliteghachi ọrụ na obere oge.
Ruo oge ahụ, anyị ga-edebe ọnọdụ mgbe niile iji kọwaa maka nnọchi nke ụgbọ mmiri na ọrụ ahụ.